OpenDocument - ဝီကီပီးဒီးယား
Open Document Format for Office Applications (OpenDocument သို.မဟုတ် ODF ဟုလဲခေါ်သည်) သည် အက်လက်ထရောနစ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ၊ ချတ်ဇယားများ၊ စလိုက်ရှိုးများကို ကိုယ်စားပြုသည်. XML ကို အခြေခံထားသော ဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်သည်။
OpenDocument ဖိုင်အမျိုးအစားကို Sun Microsystems က စတင်ဖန်တီးခဲ.သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Openoffice.org office suite တွင် သုံးစွဲခဲ.သော XML ဖိုင်အမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) အဖွဲ.အစည်းက OpenDocument ဖိုင်အမျိုးအစားကို စံတခုအဖြစ် ဖန်တီးခဲ.သည်။
OASIS စံသတ်မှတ်ချက်အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 အနေဖြင်.လည်း ထုတ်ဝေခဲ.သည်။
၁ OpenDocument အမျိုးအစားများ
၂ Application Support
၅ ကမ္ဘာတလွှား သုံးစွဲခြင်း
အသုံးများသော OpenDocument အမျိုးအစားများမှာ
.odt – စာစီစာရိုက်ရာတွင် သုံးသော ဖိုင်အမျိုးအစား
.ods – စာရင်းဇယားပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသော ဖိုင်အမျိုးအစား
.odp – စလိုက်ရှိုးများ၊ Presentations များတွင် သုံးသော ဖိုင်အမျိုးအစား
.odp – Database အတွက် သုံးသော ဖိုင်အမျိုးအစား
.odg – ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံများအတွက် သုံးသော ဖိုင်အမျိုးအစား
.odf – သင်္ချာ ဖော်မျူလာများ၊ Equations များအတွက် သုံးသော ဖိုင်အမျိုးအစားတို. ဖြစ်ကြသည်။
OpenDocument ဖိုင်အမျိုးအစားကို အခမဲ. ဆော.ဝဲလ်များ၊ လိုင်စင်ရှိသော ဆော.ဝဲလ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ ကွန်ပျူတာတွင် ထည်.သွင်းပြီး အသုံးပြုရသော ရုံးသုံးဆော.ဝဲလ်များ နှင်. Web-based ဆော.ဝဲလ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ OpenDocument ကို အပြည်.အဝ သို.မဟုတ် အနည်းငယ် ထောက်ပံ.သော ရုံးသုံးဆော.ဝဲလ်များမှာ
Aspose Words isacomponent/library available for both .NET and Java platforms which enables opening and saving OpenDocument text (ODT) documents.
Microsoft Office 2007 SP2and upwards (only Windows editions)
WordPad 6.1 (Windows7) partial support
OASIS က အသိအမှတ်ပြုသော OpenDocument ဖိုင် versions များကို အခမဲ. ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပြီး၊ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ITTF (Information Technology Task Force) ကလည်း ISO/IEC 26300 OpenDocument Format ကို "list of freely available standards" အောက်တွင် ထည်.သွင်းခဲ.ပြီး၊ click-through license ကို လိုက်နာပါက မည်သူမဆို အခမဲ. ဒေါင်းလုပ်ရယူ၊ သုံးစွဲနိုင်သည်။
OpenDocument ကို ထောက်ပံ.ခြင်း အစိုးများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ.အစည်းများ၊ ဆော.ဝဲလ် ကုမ္ပဏီများ၊ ပစ္စည်းများက OpenDocument ကို ထောက်ပံ.ခဲ.ကြသည်။ ဥပမာ
Apple Inc., Aodbe Systems, Google, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Novell, Red Hat, Sun Microsystems နှင်. အခြား ကုမ္ပဏီများ
NATO (North Atlantic Treaty Organization) အဖွဲ.အစည်းဝင် နိုင်ငံများ
TAC (Telematics between Administrations Committee) ကော်မတီ
ရုံးသုံးဆော.ဝဲလ်များ ဖြစ်သည်. LibreOffice, OpenOffie.org, Koffice တို.သည် OpenDocument ဖိုင်အမျိုးအစားကို စံအနေနဲ. သုံးစွဲခဲ.ပြီး OpenDocument တွသ်ကျယ်စွာ အသုံးပြုရန် ကူညီကြသည်။
OpenDocument Fellowship ကို တည်ထောင်ခဲ.ပြီး OpenDocument Format ကို ထောက်ပံ.၊ အားပေးခဲ.သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Wikimedia Foundation မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှစ၍ MediaWiki တွင် ရှိသော အချက်အလက်များကို OpenDocument Format ဖြင်. export လုပ်ခွင်.ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ.သည်။
OASIS ODF 1.0, 1.1 and ISO/IEC 26300:2006 do not defineadefinite spreadsheet formula language, syntax or function libraries
OASIS ODF 1.0, 1.1 and ISO/IEC 26300:2006 do not define digital signatures
The OpenDocument Format 1.0–1.1 specifications refer to 'ZIP' files but do not reference an ISO standard which describes the zip file format. *A specification for the Zip format was distributed with PKZIP in the file APPNOTE.TXT and this continues to be maintained, but this specification has not gone throughastandardization process at the ISO.
According to Jesper Lund Stocholm (Danish ISO/IEC representative), OpenDocument hasavery limited description of tracked changes. *OpenDocument does not support change tracking in elements like tables or MathML
OpenDocument ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ OpenDocument ကဲ.သို. open formats များကို ဥပဒေဆိုင်ရာ အတားအဆီး၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးများ မရှိပဲ ကာလရှာကြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတလွှမ်းရှိ အစိုးရများကလည်း OpenDocument များကို အပြည်.အဝ သို.မဟုတ် တစိတ်တပိုင်း လက်ခံသုံးစွဲရန် ပေါ်လစီများ ချမှတ်လာသည်။ OpenDocument ကို အသုံးပြုသော နိုင်ငံ သို.မဟုတ် အဖွဲ.အစည်း အချို.မှာ
European Union အဖွဲ.ဝင်များ
ယူနိုက်တစ် ကင်းဒန် (ယူကေ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenDocument&oldid=698257" မှ ရယူရန်